U Dabaaldegaya Wadayaasha Basaska
Oktoobar 14 , 2020
Minnetonka, wadayaasha basaska waxay sameeyaan wax ka badan si fudud u kaxeynta ardayda fasalka; waxay kaalin firfircoon ka ciyaaraan maalin kasta wax ku biirinta bulshada iskuulka wanaagsan.
"Wejigii ugu horreeyay iyo wejigii ugu dambeeyay ee aan ku arko iskuulka maalin kasta fasalka lixaad, toddobaad iyo siddeedaad wuxuu ahaa kii darawalkeyga baska, Elmer," ayay wadaagaan Anna Geldert, oo hadda ah oday sare oo ka tirsan Dugsiga Sare ee Minnetonka. "Had iyo jeer wuu dhoola cadeynayay, wuxuu marwalba nasiib iigu rajeeyay iskuulka mar walbana wuu hubin jiray si uu u arko sida maalintaydu u socoto." Elmer, sida darawalada kale ee basaska badan ee Minnetonka, waxay u heellan yihiin inuu ilaaliyo nabadgelyada ardaydiisa iyo inuu iyaga dareemo soo dhoweyn.
Darawallada basaska Minnetonka kaliya kama xawilaan rakaabkooda min guriga ilaa dugsiga; Waxay kaloo qiimeeyaan saamaynta togan ee ay ku yeelan karaan ardaydooda.Waxay geliyaan dadaal dheeri ah maalin kasta si ay u hubiyaan in qof kasta oo baskooda raacaya uu dareemayo nabadgelyo iyo soo dhaweyn.
“Carruur badan, wadaha baska iskuulka ayaa ah isku xirka ugu horeeya ee ay arkeen kahor intaysan aadin iskuulka maalin kasta,” ayay sharraxday Angela Sheridan, oo baska subax iyo galabba u wadata Degmada. "Runtii waan ku faanayaa naftayda, sida aan hubo in qaar badan oo darawallada kale ahi ay sameeyaan, si aan u hubiyo inaan ardayda kula xiriirayno baskeenna isla markaana aan hubinayno inaannu isku dayeyno inaan u noqonno saamayn wanaagsan. waxaan u dejinayaa carruurtaas inay guuleystaan bilowga maalintooda, waxaan rajeynayaa inay barafku u noqon doonto maalin iyaga ka sii wanaagsan. "
Sannadkan, iyada oo cudurka safka ah ee 'COVID-19', darawallada basaska ee 'Minnetonka' ayaa ka sarreeya oo ka sarreeya si ay u taageeraan ardayda. Wadooyinka qaar ayaa la waafajiyay si ay ula jaan qaadaan ardayda dhigata fasalada afraad iyo shanaad ee hada dhigata fasalka dugsiga sare, iyo wadooyin dheeri ah oo dheeri ah ayaa lagu daray markii loo baahdo markay ardayda dugsiga sare dhigtaan fasalada qayb ka mid ah maalinta Arbacada. Iyada oo la adeegsanayo siyaasado kala fogayn iyo fayadhowr oo cusub, darawallada basaska ayaa la qabsaday si loo hubiyo dhammaan baratakoolka caafimaad ee basaskooda.
Kaliya maahan inaan baska wadno, laakiin sidoo kale waxaan maareyneynaa ardaydeena waxaanan hubineynaa inay sameynayaan waxyaabaha ay u baahan yihiin inay sameeyaan si ay naftooda u badbaadiyaan, ayay tiri Ms. Sheridan. "Waxaan dhamaanteen xirannahay waji-wajiga hadda — ardayda, iyo darawallada, iyo qof kasta oo ka shaqeeya Ardeyga Koowaad. Waxaan sidoo kale u qoondeynaynaa kuraas si bulsho ahaan loo kala fogeeyo carruurta baska saaran, waxaana xaddideynaa tirada carruurta aan baska ku haysanno. "
Darawallada basasku waxay awoodeen inay sameeyaan "orod qallalan," ama tababar wadista wadadooda intaan sanad dugsiyeedku bilaaban, taas oo ka caawisay iyaga inay siiyaan dareen ah waxa laga filayo Sebtember. Intaa waxaa sii dheer, qorshaynta dheeriga ah ee gashay hagaajinta dariiqyada iyo jadwalka basaska si ay ugu habboonaadaan xadka awooda cusub iyo baahiyaha gaadiidka ayaa dhammaantood laga soo shaqeeyay waqtiga ka hor, sidaa darteed qof kastaa wuxuu dareemay inuu diyaar u yahay maalinta koowaad.
Minnetonka wuxuu si aan caadi aheyn ugu mahadcelinayaa kooxda gaadiidka sida ay ugu dadaalayaan ardaydeena. Iyadoo lagu sharfayo Toddobaadka Mahadnaqa Darawalka Baska toddobaadkan, hubi inaad uga mahadceliso darawalkaaga baska dhammaan shaqadooda adag!
U dabbaaldegaya shaqaalaha nafaqada carruurta
Shaqaalaha nafaqadu waa qayb muhiim ah oo ka tirsan bulshada iskuulka Minnetonka. Waan uga mahadnaqaynaa dhammaan waxa ay sameeyaan si ay u siiyaan cunnooyin ammaan ah oo caafimaad leh ardayda!
Tiyaatarka Minnetonka Ayaa Soo Bandhigaya Waddo-Weyn, Halkan Waa Ii Yimid!
Masraxa Minnetonka wuxuu ku faraxsan yahay inuu furo xilli-ciyaareedka 2020-21 ee Broadway, Halkan Waan Kaalay! oo ah dib u soo celin muusig oo asal ah oo lagu sameeyo banaanka buurta Magaalada Minnetonka Amphitheater.
Xurmeynta Shaqada Dayactirka iyo Xannaanada Minnetonka
Minnetonka wuxuu si aan caadi aheyn ugu mahadcelinayaa xubnahan shaqaalaha ah ee dadaalka badan iyo sida ay ugu heelan yihiin xaqiijinta amniga iyo nadaafada iskuuladeena.
Abaalmarinta Abaalmarinta Ardayda Sannadka 2020
Oktoobar 10, 2020, Dugsiyada Dadweynaha ee Minnetonka iyo Ururka Qalinjabiyeyaasha Minnetonka waxay u dabaaldegi doonaan guulaha ay gaareen ardayda ka qalin jabisay munaasabadda Abaal-marinta Sannadlaha ah ee Ardayda.